Ikpebi ngwaahịa, Ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ | Martech Zone
N’izu a ka m natara Nweta Na si Pragmat ahịa.
Enwere m ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke akwụkwọ ugbu a ma na-anụ ụtọ ya. Enwere otutu aka-na ihe atụ nke otu azụmahịa hubris duru ha gaa n'okporo ụzọ mkpebi adịghị mma n'ihi na ha anọghị 'Tuned In' na atụmanya ha. Site na ịchọpụtaghị ihe atụmanya ha dị mkpa, ụlọ ọrụ ndị ahụ na-ewepụta ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ndị stin.
Site na mmalite nke mgbasa ozi mmekọrịta na weebụ, echere m na enwere nguzozi mgbe ị na-ekpebi ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ, agbanyeghị, nke gbatịrị karịa atụmanya ahụ. Ugbu a onye ahịa ahụ bụ onye ahịa siri ike, ịkwesịrị ị paya ntị na ha. Akwụkwọ ahụ nyere mmụọ ozi a.
Nke a bụ ụzọ m ga - esi kpebie ihe kacha mkpa maka ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ ebe m na - arụ ọrụ:
Kedu ihe nnyapade? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, gịnị ka m na-emepe nke ga-eme ka njigide ndị ahịa? Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere SaaS, dịka ọmụmaatụ, ị nwere API? API dị mma n'ihi na ha chọrọ koodu dị ala, obere nkwado, ha na-achọ ntinye ego nke ndị ahịa gị iji jikọta ngwaahịa gị.
Gịnị Bụ Sensọ? Productsfọdụ ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ atụmatụ bara uru maka ịdị arọ ha ga-enwe na ụlọ ọrụ ahụ. Otu ezigbo ihe atụ nke a bụ ịtụ ahịa maka ụlọ oriri na ọ .ụ Mobileụ. Ezie na isi Pizza outlets ka na-enweta 10% nke ahịa ha n'ịntanetị, ugbu a ha etinyela ego na mobile.
Ulo oru a gha aghaghi ibu onye ahia ya n'ihi na onye oru ya na enweta ya. Agbanyeghị, ha ga-agba ọsọ iji nweta azịza iji nweta mgbatị ahụ. Na Kacha ọhụrụ hype bụ wijetị.
Sidenote: Ekwenyere m na inye iwu na wijetị ga-enwe ụbọchị ha - mana a ga-emezigharị kpamkpam oge ka teknụzụ na-akawanye mma. Ulo oru ndi a tinyere ego ha ugbua n'ihi uzu na ahia ndi ozo - obughi ihe si na ahia puta.
Gịnị bụ NWANYI- kwesịrị? Ndị ahịa gị na-ahazi na na anọghị n'ịntanetị. Ndị ọrụ na-arapara n'ụlọ ọrụ mana kwaga na ụlọ ọrụ dị iche iche. Nke ahụ pụtara na ire Okwu n'Ọnụ dị mkpa na azụmahịa gị kwesịrị ile ya anya dị ka ohere. Ọ bụrụ na ị mepụta ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ atụmatụ nke ndị ahịa gị na-aga unere, ị kwenyere na ha na-agwa ndị folks ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọrụ ahụ!
Kedu ihe bara uru? Nke a bụ echiche dị n’azụ ihe m gụrụ ugbu a Nweta Na. Nke a bụ ihe kachasị na-eto eto azụmaahịa gị - ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ atụmatụ gị ga-ejupụta azụmaahịa mkpa. Yabụ, site na ịzụrụ ngwaahịa gị - uru ahịa m bara karịa ọnụ ahịa ya. Ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa ebe ahụ, ị ​​nwere ike ọ gaghị aga nke ọma. Icere ice na Eskimos bụ naanị akụkọ ifo.
Otu n'ime ihe ndị a nwere ike imebi ihe ọzọ. N'oge ụfọdụ, anyị mepụtara atụmatụ ọhụụ naanị na atụmanya dị ukwuu. Ọ bụ ịgba chaa chaa, mana anyị ghọtara na itinye ego ga-akwụ ụgwọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị enwetaghị onye ahịa ahụ. Ekwenyere m na nnukwu ụzọ map kwesịrị inwe atụmatụ anọ ndị a na ya.
Tags: Nzọụkwụ 6 iji banye ahịanjikarịcha ọdịnayaahịa nkwadoimewe ihe omumanjikarịcha alanwe alainbound ahịa usorondu nurturingnjikarịcha mpagharaPragmat ahịa